रोमी २:१६-२९ – Word of Truth, Nepal
यदि अन्यजातिसँग भित्री वास्तविकता छ भने, ऊसँग साँच्चै एक महत्त्वपूर्ण कुरा छ। बप्तिस्माको उदाहरण: तपाईं कुनचाहिँ व्यक्ति हुन रोज्नुहुन्छ? – ख्रीष्टमाथि विश्वास गरे तापनि कारणवश बप्तिस्मा नलिएको व्यक्ति हुन कि बप्तिस्मा लिए तापनि ख्रीष्टमाथि विश्वास नगरेको व्यक्ति हुन? यदि तपाईंलाई विधि (ritual) कि वास्तविकता (reality) मा एउटा छान्नु पर्ने भयो भने वास्तविकतालाई छान्नुहोस्। निश्चय नै दुइटै गरिनु सर्वोत्तम हो। एउटा साँचो विश्वासीले ख्रीष्टको आज्ञापालन गर्न र उसले मुक्ति पाएको क्षणमा उसलाई के भयो भनी देखाउन उसले बप्तिस्मा लिनुपर्छ। हामीले भन्न खोजेको यतिमात्र हो कि बप्तिस्मा लिएको एउटा अविश्वासी हुनु भन्दा बप्तिस्मा नलिएको एउटा विश्वासी हुनु नै उत्तम हो! विवाहको औँठीबाट उदाहरण: विवाहको औँठी भनेको एउटा पतिले आफ्नी पत्नीप्रति आफू विश्वासयोग्य हुन्छु भनेर परमेश्वरको सामु व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताको केवल एक चिन्ह मात्र हो। तपाईं कुनचाहिँ रोज्नुहुन्छ? पाँच-पाँचजना परस्त्रीको पछि लाग्ने औँठी लगाएको पति कि आफ्नी पत्नीप्रति विश्वासयोग्य व्यवहार गर्ने औँठी नलगाएको पति? वास्तविकता (विश्वासयोग्यता) बिनाको चिन्ह (औंठी) को कुनै औचित्य छैन। पावलले भन्न खोजेको यही हो, एकातिर खतना नहुँदैमा अन्यजाति दोषी ठहरिँदैन र अर्कोतिर खतना हुँदैमा यसले यहूदीलाई बचाउँदैन (गलाती ५:६ र ६:१५ पढ्नुहोस्)।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 10:25:432020-04-28 14:36:11रोमी २:१६-२९
रोमी २:११-१५ रोमी ३:१-८